Siyabakhathalela eKildare - IntoKildare
Imikhuba Engcono Kakhulu Yezempilo Nezokuphepha
I-Kildare Network isebenzise uhlelo olubanzi lwesifunda olubizwa nge 'We Care in Kildare'. Lokhu kuzibophezela kubavakashi bethu kuzoqinisekisa ukuthi izinyathelo ezilandelayo sezikhona ukuvikela impilo nokuphepha kwabo bonke.
Ngokuya ngemikhombandlela yeFáilte Ireland eyakhishwa ngoJuni 8th 2020, i-Into Kildare Network isebenzise uhlelo olubanzi lwesifunda olubizwa nge 'We Care in Kildare'. Lokhu kuzibophezela kwezivakashi zethu kuzoqinisekisa ukuthi izinyathelo ezilandelayo zikhona ukuvikela impilo nokuphepha kwazo zonke izivakashi nezitebhisi?. Sigcina amazinga okuphepha aphakeme kakhulu ngakho-ke singabheka phambili ekwamukeleni izivakashi zethu ngomuzwa ojabulisayo nophumuzayo maduze!
Ukuhlela Kusengaphambili Ukuvakasha Kwakho
Imininingwane enemininingwane yezivakashi iyatholakala ku-intokildare.ie
Amandla ancishisiwe okuvumela ukwehlukaniswa komphakathi.
Ukubhuka online kusengaphambili ukugwema izixuku nolayini.
Izindawo eziqondile zezivakashi ezisengozini lapho kungenzeka khona.
Ukuphrinta okungathintwa ekhaya noma amathikithi eselula wokuheha.
Izindawo zokukhokha kusengaphambili ukugwema ulayini.
Izindawo zokufinyelela zabavakashi ezincane.
Izinombolo ezikhawulelwe ezinolayini abalawulwayo.
Ukuqinisekisa nokuqeqesha abasebenzi abaqeqeshiwe.
Iziteshi zokuhlanza izandla.
Amazinga aphakeme Kakhulu Wezempilo Nokuphepha
Ukugeleza kwamakhasimende okuhleliwe.
Sula izimpawu zokuqhela komphakathi.
Izindlela zokuhlanza ezithuthukile nezingaguquguquki.
Izindawo zokuhlanza izandla noma zokugeza izandla.
Ukuxhumana okungathintwa nabasebenzi
Amagceke angena umoya njalo.
Ithimba Elifanelekayo Nokuzethemba
Abagcini bezokuxhumana nabantu.
Ukuqeqeshwa ngokugcwele ngezinyathelo zokuphepha.
I-PPE yabo bonke abasebenzi.
Ukuhlolwa kwezempilo nsuku zonke.
Isipiliyoni seKhasimende le-5 Star
Okuhlangenwe nakho okuphephile, kokwamukela nokukhumbula.
Ukuholwa kokuqedwa komphakathi nokwenza.
Ukuhlala okude namabhentshi angaphandle.
Izindlela ezifanele zokuphepha kokudla.
Ukuthintana kuze kufike amaphuzu nezinkokhelo.
Ukuhlanza kwenziwa ngezikhathi ezithile.
Ukubhalisela uhlelo lwe-'We Care in Kildare '
Amabhizinisi akhombisa iphosta iKildare Fáilte asayine isimemezelo sokuthi ahambisana nawo wonke amaphuzu uma kusebenza ebhizinisini lawo futhi alandela ukuholwa nguhulumeni. Ngemuva kokuphothulwa kwesimemezelo esingezansi, amabhizinisi azobamba iqhaza azothola isitikha se-'We Care in Kildare 'Poster neBadge esizoboniswa endaweni yabo, kanye nekhophi yedijithali yeposta nebheji.